४६ जना मधेशी मार्ने सुशिल कोईरालालाई भोट हाल्नेहरुले मधेशीका कुरा गर्न मिल्छ ?
लोकतन्त्रमा आस्था र विश्वास राख्ने कुनै पनि प्राणीले हिंसामा विश्वास गर्दैन । नेकपा एमालेले सुरु गरेको मेची महाकाली अभियान कसैका विरुद्धको अभियान होईन । यो त एमालेले आफ्ना कुरा जनतामाझ पुर्याउनको लागि...
सत्तारुढ घटक तथा सरकार स्थानीय चुुनावको तिथिमिति सहित सम्पूर्ण तयारीमा लागिसकेको, निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारीलाई तीव्रता दिईरहेको, मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमालेले चुनावी अभियान नै सुुरु गरिसकेको र आम ...
मन पोलेको मानवीय भावहरू मरेका छैनन भन्न पनि सबै एक हुने समय आएको छ । सफलता एक्लै चुम्न सकिन्न त्यसलाई सकरात्मक पक्षहरूको साथको खाँचो पर्दछ ।हिजैदेखि आफै मात्र देख्ने आफै मात्र सबै थोक हुँ भन्ने मानवी...
हाम्रो समाजमा मुख्यतः तिनवटा जेनेरेसन विद्यमान छन । एउटा जेनेरेसन ५० वर्ष माथिको छ, अर्को जेनेरेसन ३५ बर्षमाथिको छ र आधुनिक जेनेरेसनको रुपमा २५ बर्ष सम्मका लाई लिन सकिन्छ । यि तिनै जेनेरेसनका विचमा ...
सडकमा मानिसहरूले सोध्ने गर्दछन् : कम्युनिष्टहरू किन यति धेरै फुट्ने गर्दछन् । उनीहरूका बीचमा किन यति धेरै विवाद हुने गर्दछन् ? यहाँसम्म कि कैयौँ पत्रकार र बुद्धिजीवीहरूले पनि त्यही कुरा उठाउने गर्दछन्...
संबिधान संशोधन बिना स्थानिय चुनावलाई निर्बाध रुपमा सम्पन्न हुन दिँदा मधेशी मोर्चा, नयाँ शक्ती, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको जनाधार प्रष्ट खुल्नेछ । तत्पश्चात भारतीय एजेण्डा बोक्नेहरु जनताबाट खुइलिने स...
राजनीतिमा देखिएको बेथिती
बनाउनमा होइन, भत्काउनमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । देशमा भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमितता, सरकारी अकर्मण्य, ढिलासुस्ती आदि विकृतिविरुद्धको आवाज मधुरो बन्दै गइरहेको आभास हुँदै छ । त्यस्तो आवाज उठाउनेहरू प...
जब संविधान २०७२ असोज ३ गते संविधानसभा भवनमा तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्धारा वडो भावुक शैलीमा सार्वजनिक हुदै थियो, एक निमेषमै बाहिर निस्किएर उनै डा. बाबुराम कुर्लिए, यो संविधान अपूर्ण छ, त्...
नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भूषाल एमालेका नेतामात्र होइनन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई गारेटोबाट नयाँ मूलबाटोमा ल्याउने एउटा अध्येताका रुपमा पनि परिचित छन् । उनले पछिल्लो समय बहसमा ल्याएको ‘ने...
अब कहाँ फुल्छ राप्रपाको कमल !
संसदीय राजनीतिलाई कसरी ब्यक्तीगत लाभमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयका डाक्टर विजय गच्छदारले ओलीलाई पहिलो देख्ने र ओलीले कमल थापालाई दोश्रो बन्न सक्ने सतही चाहानामा बर्तमान संबिधानको समानुपातिक निर्...
कहीँ नभएको जात्रा जस्तो अध्यक्षले राजीनामा दिएपछि स्थायी कमिटीकै बैठकले उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष तोक्छ, संगठनको साधारण सदस्य नभएका साथी एकैचोटि केन्द्रीय कमिटीको सचिव हुन्छन् र बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका क...
यो संसारमै हुन नसक्ने र नभएको सपना कमल थापाको पार्टीले देख्दै गर्दा प्रचण्ड राप्रपासंग भावनात्मक रुपमा किन एकताका कुरा गर्दैछन ? प्रचण्डलाई अर्को चमत्कार देखाएर राजासहितको तथाकथित संवद्र्धनवादको नाममा...
कस्ले जन्माउँछ सीके राउतहरु !
तात्कालिन समयमा (सन २०१४ मा) डलरको गुन तिर्दै बक्तब्यबाजी गर्नेहरु पद्ध्मरत्न तुलाधर, दमननाथ ढुङ्गाना, बिरेन्द्र मिश्र, खगेन्द्र संग्रौला, सिके लाल, मल्ल के सुन्दर, कृष्ण भट्टचन, कृष्ण हाछेथु, बिजयक...
निरर्थक जनयुद्धका छदमभेषीहरुलाई पत्तासाफ गरौं
सोमवार, फाल्गुन २, २०७३
जनयुद्धको उदगम र समापन दक्षिण छिमेकको रुचि, रोजाई र रोडम्याप अनुरुप भैदिएको नांगो सत्यले भन्न करै लाग्छ, भारतीय ईशाराको कथित जनयुद्ध नेपाललाई कमजोर पार्ने दिल्लीको झेल्ली थियो भने माओवादी क्रान्तिको म...
राष्ट्र र जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्टा हो । नेताले बनाउने त विधी हो । विधी भयो भने मात्र देश बलियो हुन्छ भन्नुपर्नेमा क्षेत्रियतावादमा फस्नु आफैमा धिक्कारजनक छ । प्रहरी महानिरिक्षक उपेन्द...
गत आर्थिक बर्षको पहिलो पाँच महिनामा रु. १० अर्व ७० करोड मुल्यका सवारीका साधन तथा तिनका पार्ट पुर्जा आयात भएकोमा यो बर्षको सोही अबधिमा सो आयात १५३.५ प्रतिशतले बढेर रु. ३७ अर्व ८३ करोड पुगेको छ । गत बर्...
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरुमा आगामी फागुन १४ गते स्ववियू निर्वाचन गराउने घोषणा संगै अहिले विद्यार्थी संगठनहरुबीच चुनावी सरगर्मी सुरु भएको देखिन्छ । चुनावलाई मध्य नजर गर्दै त्रिविले स...
नेकपा एमालेमा उपमहासचिव घनश्याम भुषाल एमालेका नेता मात्र होइनन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई गारेटोबाट नयाँ मुलबाटोमा ल्याउने एउटा अध्यता वा ब्याख्याताका रुपमा पनि परिचित छन् । उनले पछिल्लो समय बहसम...
बिबाह जेठ १० तिर गरौँला, टिका टालो आजै गरौं भन्ने शैलीमा चुनावको तयारी गर्ने र गराउने प्रधानमन्त्री दाहाल कला एक समय (पूर्वप्रम ओलीसंग लभ परेको बेला) एमाले अध्यक्ष समेत बन्ने सपना देखे जस्तै हुने सबैल...